Ọrụ nka dị mfe maka ụmụaka | Crafts On
Nka Ndị Dị Mfe 15 Maka Ụmụaka
Isabel Katalan | 05/10/2021 09:00 | Crafts, Crafts maka ụmụaka
Ọ na -agwụ ụmụaka ike n'ụlọ ma ha amaghị ihe ha ga -eme iji kporie ndụ? Na post ọzọ ị ga -ahụ 15 mfe crafts maka ụmụaka nke a na -eme na jiffy nke ha ga -eji nwee ọ ofụ nke ukwuu na usoro okike na mgbe emechara, mgbe ha rụchara nka ma nwee ike iji ya gwuo egwu.
Iji mee nka ndị a, ịkwesighi ịzụta ọtụtụ ihe. N'ezie, ọ bụrụ na ị bụ onye na -akwado nka, ị ga -enwe ọtụtụ n'ime ha n'ụlọ site n'oge ndị gara aga, n'agbanyeghị na ị nwekwara ike irite uru n'ihe eji emegharị eme iji mee ha. Ị gaghị agbaghara ya!
1 Easy superhero nwere mkpanaka osisi na kaadị
2 Nnọọ mgbaghoju anya maka ụmụaka
3 Ozi akara aka
4 Ekeresimesi ihe ịchọ mma ekeresimesi iji mee ụmụaka
5 Recycling crafts maka ekeresimesi. Onye snow
6 Katọn ejula iji mee ụmụaka
7 Ụlọ akụ dị mfe na -emegharị karama mmiri ara ehi ntụ ntụ ma ọ bụ ihe yiri ya
8 Ụdị geometric ka ọ bụrụ stampụ, ejiri mpịakọta akwụkwọ mposi mee
9 Kaadiboodu na crepe akwukwo urukurubụba
10 Potmụaka pensụl nhazi pen
11 Akpa ákwà iji na -esi kabinet mmanụ
12 Slippers mara mma maka oge okpomọkụ
13 Egwuregwu ụmụaka eji egwuri egwu: ọjà anwansi
14 Pensụl na-elekọta pusi
15 Egwuregwu Hoops
Easy superhero nwere mkpanaka osisi na kaadị
N'etiti ọrụ aka dị mfe maka ụmụaka ị nwere ike ịhụ nke a dị mfe nnukwu osisi ejiri osisi na kaadiboodu mee. Ihe ị ga -achọ bụ mkpisi akwụkwọ mkpị, kaadiboodu, na ihe nrịbama agba.
Ihe dị mma gbasara nka a bụ na ị nwere ike ịme ya n'ime nkeji ole na ole, ụmụaka ga -enwe ike iji ya gwuo egwu. Na mgbakwunye, enwere ike ịhazi ya site na ịhọrọ agba na ọbụlagodi leta nke dike na mbido aha nwata, dịka ọmụmaatụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịma ka esi eme ya, echefula post ahụ nnukwu osisi ejiri osisi na kaadiboodu mee.
Otu egwuregwu kacha amasị ụmụaka ka ha na -ekpori ndụ bụ egwuregwu mgbagwoju anya, site na obere ruo na nke kacha mgbagwoju anya. Ihe mgbagwoju anya ejiri akwa mee dị ka mmetụta zuru oke maka ịrụ ọrụ na nka moto na mmetụta, nke dị mma maka ụmụaka ịzụlite ikike ọgụgụ isi na nke anụ ahụ ha.
Ọzọkwa, egwuregwu a dị mfe ịme ị nwekwara ike ịme ụdị ihe onyonyo dị iche iche iji jiri ya chọọ ya mma. Ị ga -achọ akwa nwere mmetụta, eriri ịkpa akwa, agịga gbara ọkpụrụkpụ na velcro nrapado, n'etiti ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụta ka esi eme ya site na nzọ ụkwụ, lee post Nnọọ mgbaghoju anya maka ụmụaka.
Ozi akara aka
Nke a bụ otu ọrụ aka dị mfe maka ụmụaka ị nwere ike iji naanị ihe ole na ole ị nwere n'ụlọ dịka kaadiboodu nwere agba, akwụkwọ crepe, mkpa, gluu na akara.
Site na ngwa ndị a niile ị nwere ike ịmepụta nke a ihe ịrịba ama nghọta n'akụkụ ọnụ ụlọ nke ụlọ ahụ. Ị chọrọ ịma ka esi eme ya? Lelee post ahụ Ozi akara aka.
Ekeresimesi ihe ịchọ mma ekeresimesi iji mee ụmụaka
Na mgbakwunye na ịbụ otu n'ime ọrụ aka dị mfe maka ụmụaka, ọ bụkwa otu n'ime ụdị kachasị ebe enwere ike iji ya dịka ihe ịchọ mma osisi ekeresimesi ma ọ bụ dịka kaadị ekele maka onye pụrụiche n'oge ụbọchị ndị a.
Ọ dị nfe na ọbụlagodi obere ezinụlọ nwere ike isonye na nkwadebe ya. Iji mee ya ị ga -achọ naanị kaadiboodu, pensụl, akara ojii, ụfọdụ bọọlụ nwere agba na ụfọdụ ihe ndị ọzọ ị nwere ike ịhụ na post Ekeresimesi ihe ịchọ mma ekeresimesi iji mee ụmụaka.
Ọrụ nka ọzọ kachasị dị mfe maka ụmụaka yana ọmarịcha isiokwu ekeresimesi ị nwere ike ime bụ katọn snowman.
Ị ga -achọ akwụkwọ mpịakọta efu, rọba ụfụfụ, poms pom, mmetụta, ihe nrịbama, na ihe ole na ole ndị ọzọ. Nsonaazụ ya dị mma nke ukwuu, ma ọ bụ chọọ ime ụlọ ụmụaka mma ma ọ bụ jiri ya mere ihe ụmụaka ji atụrụ ndụ ruo nwa oge.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ usoro niile nke otu esi eme ya, echefula post ahụ Mmegharị nka maka ekeresimesi: Snowman. Ọ ga -adịrị gị mma!
Katọn ejula iji mee ụmụaka
Obere ejula a bụ otu n'ime ihe ụmụaka kacha dị mfe ịme ngwa ngwa. Ọ dị mma ka ụmụaka mụta ka ha jiri aka ha na -eme nka ma nwee nnukwu ọ funụ ịzụlite echiche ha.
Isi ihe eji eme ejula a bụ katọn. N'ezie ị nwere ọtụtụ n'ụlọ! Ị chọrọ ịhụ ka ị ga -esi eme ha? Na post Katọn ejula iji mee ụmụaka ị ga -ahụ usoro niile.
Ụlọ akụ dị mfe na -emegharị karama mmiri ara ehi ntụ ntụ ma ọ bụ ihe yiri ya
Ugbu a afọ ọhụrụ bidoro, ọ bụ oge dị mma ịkụziri ụmụaka ịchekwa ụgwọ ọnwa ha ka ha nwee ike zụta trinket na ihe ụmụaka ji egwuri egwu n'ime afọ niile.
Ụzọ na -atọ ụtọ ime ya bụ site na ịmepụta nke a ụlọ akụ piggy na karama mmiri ara ehi powdered. Ọ bụ otu ọrụ aka dị mfe maka ụmụaka nke ị ga -achọ ihe ole na ole: ụgbọ mmiri, obere ajị anụ, onye na -egbu ihe na silicone dị ọkụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịma usoro nrụpụta nke ụlọ akụ piggy a, echefula post ahụ Mfe piggy akụ imegharị ihe maka iji mmiri ara ehi ntụ ntụ ụdị nwere ike.
Ụdị geometric ka ọ bụrụ stampụ, ejiri mpịakọta akwụkwọ mposi mee
Ị chọrọ inyere ụmụaka aka ka ha chọọ ụlọ akwụkwọ ha mma na ihe ọchị na n'ụzọ mbụ? Mgbe ahụ lelee post ahụ Dị geometric iji stampụ na akwụkwọ mposi na-apụta n'ihi na ọ bụ otu ọrụ aka dị mfe maka ụmụaka ị nwere ike iji obere ihe ị nwere n'ụlọ mee na ọkụ. Ị ga -achọ naanị akara, ụfọdụ katọn akwụkwọ mposi na ụfọdụ akwụkwọ ndetu.
Kaadiboodu na crepe akwukwo urukurubụba
Ọrụ ọzọ dị mfe maka ụmụaka ị nwere ike iji obere kaadiboodu, akwụkwọ crepe, akara na gluu bụ nke a cardstock na crepe akwụkwọ urukurubụba ọ dị oke mma. Ọ naghị ewe ogologo oge ime ya na ozugbo ị ga -enwe obere ihe ịchọ mma iji chọọ ụlọ ụmụaka mma.
Iji mara ka esi eme ya lee post Kaadiboodu na crepe akwụkwọ nru ububa ebe ọ na -abịa nke ọma kọwara nke ọma site na nzọụkwụ.
Potmụaka pensụl nhazi pen
Ụmụaka na -agbakọba nnukwu crayons, pensụl na ihe nrịbama iji tee nke na -emecha na -agagharị n'ụlọ. Iji gbochie ha ịla n'iyi ma nwee eserese niile n'otu ebe, nwaa ime nke a ụmụaka pensụl nhazi ite.
Nke a bụ ụfọdụ ọrụ nka kacha atọ ụtọ ma dị ụtọ ụmụaka nwere ike ime. Na mgbakwunye, ọ ga -enye gị ohere imegharị ihe ndị ị nweburu n'ụlọ kama ịtụfu ha.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịma ka esi arụ nka a, echefula post ahụ ụmụaka pensụl nhazi ite.
Akpa ákwà iji na -esi kabinet mmanụ
Ndị a sachets akwa iji na -esi isi kabinet Ọ bụ ọrụ aka ọzọ dị mfe maka ụmụaka na, na mgbakwunye inye obere ụmụaka oge dị mma, ga -abụkwa freshener ikuku eke maka uwe, nke ga -egbochi uwe ịnweta isi na iru mmiri.
Ha na agba, bara uru na zuru oke maka onyinye. N'otu ehihie ị nwere ike iji obere akwa mee ọtụtụ ihe, okooko osisi mịrị amị na lavender ma ọ bụ ihe dị mkpa cinnamon. Iji mara ihe ndị ọzọ iji mepụta nka a, ana m akwado ka ị gụọ post ahụ Akpa ákwà iji na -esi kabinet mmanụ. Ọ ga -abụ ihe obi ụtọ imepe kabinet!
Slippers mara mma maka oge okpomọkụ
Icho mma ụfọdụ sneakers ọcha na nrịbama Ọ bụ ọrụ aka kachasị mfe maka ụmụaka nke ị nwere ike ime. Ị nwere ike inyere ụmụaka aka imepụta eserese nke imewe dị mfe. Ị ga -achọ naanị otu akpụkpọ ụkwụ na ihe nrịbama abụọ na -acha ọbara ọbara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ị nwere ike ịhazi cherị ma ọ bụ jiri echiche gị wee tee ihe masịrị gị. Na post Slippers mara mma maka oge okpomọkụ ị ga -ahụ vidiyo iji megharịa nka a. Ị gaghị agbaghara ya!
Egwuregwu ụmụaka eji egwuri egwu: ọjà anwansi
Mgbe ụfọdụ ihe egwuregwu ụmụaka kachasị mfe bụ nke ụmụaka na -enwekarị mmasị na ya na -ekpori ndụ. Ọ bụ ikpe nke Ọjà anwansi, otu n'ime ọrụ aka dị mfe maka ụmụaka nke ị nwere ike ime n'ime nkeji ole na ole.
Iji mee ihe egwuregwu ụmụaka a, ịnwere ike iji ihe emegharịrị emegharị nke ị nwere n'ụlọ dịka ụfọdụ ahịhịa ma ọ bụ ahịhịa iji kpoo soda. Ma ọ bụrụ na ịnweghị ha, ị nwere ike ịchọta ha na nnukwu ụlọ ahịa ọ bụla.
Ewezuga ahịhịa ị ga -achọkwa obere teepu ma ọ bụ teepu. Nhọrọ ọzọ bụ gluu, mana ọ bụrụ na ị nwere ike họrọ teepu, m na -akwado ya n'ihi na ọ ga -aka mma, dị mfe ịme yana ọ dịkwa nchebe. Dịka ị pụrụ ịhụ, naanị ihe ole na ole ka ị chọrọ!
Pensụl na-elekọta pusi
Ọ bụrụ na -amasị gị ịmegharị ihe, ọrụ ọzọ dị mfe maka ụmụaka ị nwere ike ime bụ nke a pensụl onye na-elekọta pensụl jiri akwụkwọ mpịakọta akwụkwọ mposi nke ị nwere n'ụlọ. Maka nke ọzọ, ị gaghị achọ ọtụtụ ihe ndị ọzọ ewezuga ụfọdụ akara, otu mkpa, obere gluu na anya nka.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịma ka esi eme nwamba mara mma nke a site na nkwụsị, echefula post ahụ Pensụl na-elekọta pusi.
Este Nịm nke yiri mgbaaka Ọ bụ ọrụ aka ọzọ dị mfe maka ụmụaka ị nwere ike iji ihe ị nwere n'ụlọ mee. Obere kaadiboodu, mpịakọta akwụkwọ mpịakọta kichin, akara na gluu ga -ezu iji mee egwuregwu a na -atọ ụtọ nke ị nwere ike jiri egwu ụfọdụ n'ime ma ọ bụ na mpụga ụlọ.
Ọ ga -amasị gị ịmara ka esi eme mgbaaka mgbaaka a? Lelee post ahụ Nịm nke yiri mgbaaka ebe ị ga -ahụ ntuziaka zuru ezu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Crafts maka ụmụaka » Nka Ndị Dị Mfe 15 Maka Ụmụaka
Echiche 4 iji chọọ ụlọ anyị mma na Halloween